हिमाल खबरपत्रिका | कलाकार प्रेमिका
- अभिमन्यु निरवी
“म प्रीति... बिहान पत्रिकामा अन्तर्वार्ता पढेकी थिएँ।”
उसको अभिनयलाई नराम्रो भन्न सकिन्नथ्यो। नवरसको राम्रै ज्ञान थियो उसलाई। पढेकी थिई। मान्छेहरूले खुलेरै उसको तारिफ गरेको मैले सुनेको थिएँ। खासमा, मैले लेखक हुने सपना पाल्न थाल्दा ऊ अभिनयको मैदानमा एक किसिमले जमिसकेकी थिई। एक दुई पटक केही नायकहरूसँग उसलाई रेस्टुरेन्टहरूमा भेटेपछि हाम्रो खटपट शुरू भयो। तर, उसको लक्ष्यको अगाडि त्यो खटपटले काम गरेन। मैले पनि बाधक नहुने निर्णय गरें। यसरी ऊ स्वतन्त्र भई। सम्बन्ध तोडेर हामी दुवै खुशी भएका थियौं।
प्रीतिको फोन आएदेखि नै म वास्तवमा फुरुङ्ग थिएँ। उसको अगाडि एउटा सफल मान्छेको रूपमा उभिन लालायित थियो, मेरो मन। म उसलाई भन्न चाहन्थें, “तिम्ले मेरा कुरा मानेको भए...!”
शुरूमै रणवीर पहाडीको म्यासेज थियो– 'प्रीति, तिमी भन मात्र म तिम्रो लागि जे पनि गर्न सक्छु। मेरो लागि तिमी केही गर, बदलामा आकाशमा पुर्‍याइदिन्छु।'
फिल्म निर्देशक सुवास चन्द्रको म्यासेज थियो– 'तिमीले रोल नपाउने कुरै आउँदैन, तर पहिले भेट्नु, बस्नु त पर्‍यो नि! तिमी अस्ति पार्टीमा बोलाउँदा पनि आइनौ।'
सम्पादक विष्णु दाइले लेखेको थियो– 'तिम्रो सुन्दरताको बयान के गरुँ? प्लिज, यो फिल्डमा तिम्रो भाग्य चम्काइदिने जिम्मा मलाई देऊ।'
“मैले चाहेको भए...”, प्रीतिले वाक्य पूरा गरिनँ।